India: Ry Bavy ‘Fahasahiana’ Mamaly Bontana An’ireo Màmbam-Piraisana Ara-Nofo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Desambra 2014 2:39 GMT
Dikasary avy amin'ny antsafan'ireo mpirahavavy feno fahasahiana, tao amin'ny Times Now Channel (Potsiro ny sary hahitànao ny antsafa)
Nahatohina ireo Indiana tamin'ity herinandro ity ny lahatsary fohy nalaina tany ivelan'i New Delhi tamin'ny alàlan'ny finday taorian'ny namoahana ilay lahatsary nampiseho fifandonana taorian'ny andrana saika hanaovana ankeriny ny tovovavy roa tao anaty fiara fitateram-bahoaka hipoka olona tany Rohtak, 70 kilaometatra eo ho eo miala ny renivohitra Indiana. Efa ho herintaona izay no lasa hatramin'ny nisian'ilay fanolànana tambabe sy famonoana nanjo ilay tovovavy 23 taona tao anaty fiara fitateram-bahoaka teny am-pandehanana, mahavelom-panantenana ny tranga tamin'ity herinandro ity satria vitan'ireo saiky niharany, izy mirahavavy Aatri sy Pooja, ny nanilika ireo nikasa hanao an-keriny azy ireo.
Ao anatin'ilay lahatsary, miaro irery ny tenany ry Aatri sy Pooja, tsy nisy na iray aza tamin'ny mpandeha mba nanampy azy. Tamin'ny fihetsika efa toa mandeha ho azy, nanaisotra ny hetrany ny iray ary nampiasa izany hamelezana ireo namely azy. Ilay vehivavy iray kosa namaly tamin'ny totohondry, raha ny rahavaviny mbola mively fehikibo an'iretsy lehilahy. Tsy voarakitra ao anatin'ny lahatsary eto ambany fa vitan'ireo mpanolana ihany ny namoaka ireto tovovavy ireto avy tao anaty fiara fitaterana, saingy avy eo nandositra ry zareo, nahita biriky ho fiarovan-tena mantsy izy mirahavavy.
Taorian'ny nivoahan'ilay lahatsary sy ny sahotaka naterany nanerana ny firenena, voalaza fa nahasambotra olona telo noahiahiana tamin'ilay tranga ny polisy Indiana. Naato tamin'ny asany noho ny tsy nandraisany andraikitra ihany koa ilay rangahy namily ny fiara. Hoy ny polisy, nanana fahafahana tsara ilay mpamily hitondra ny fiara ho any amin'ny biraon'ny polisy ary nanolotra ireo lehilahy ireo tamin'ny manampahefana.
19 taona ary mpianatra ao amin'ny Kolejy Jat ao Rohtak ireo lehilahy telo voampanga tamin'ilay herisetra. Milaza ny ray aman-drenin'ireo lehilahy ireo fa “hadisoana no nahavoarohirohy” ary ireo, satria resaka seza hipetrahana no anton'ny fifamaliana, hoy ry zareo, fa tsy resaka firaisana ara-nofo.
Noho ny fiarovan-tena tamim-pahatoniana nataon'izy mirahavavy, noderain'ny olona nanerana an'i India ho toy ny ohatra mivaingana amin'ny fomba tokony hananan'ny vehivavy hery sy tanjaka hanohitra ireo mpanao ankeriny i Rohtak sy Pooja.
Te-hankasitraka ireo tovovavy aho ary hangataka amin'ny manampahefana mba handray izay fepetra mifanaraka amin'ny tokony ho izy,” Niteny i Lalitha Kumarmangalam, mpitondra tenin'ny Kaomisionam-pirenena ho an'ny Vehivavy ao amin'ny governemanta, fa “Vitsy ny tovovavy sahy mifanandrina amin'ny mpanolana. Tokony handray andraikitra ny governemanta. Mangataka ny Indiana tsirairay aho mba hiroso sy hanampy.”
Toa tsy ilay sakoroka tao anaty fiara fitaterana ihany no herisetra efa nolalovan'izy mirahavavy. Lahatsary fohy iray hafa navoakan'ny NDTV tamin'ity herinandro ity saingy efa voarakitra an-tsary volana iray tany aloha, no mampiseho toa i Rohtak sy Pooja midaroka lehilahy iray tao aminà kanja iray. Araka ny lazain'ny Times of India, “Ohatra no nasehon'ireto tovovavy ireto mikasika ny fomba tokony hiatrehana ireo mambam-piraisana ara-nofo, na tsy misy tonga hanampy aza.”
Tao amin'ny Twitter, ny teny diezy #Rohtakbravehearts no nampiasaina mba hanehoana fisaorana sy fanohanana azy mirahavavy:
Tiako ny ataon'ireo tovovavy ao India amin'ireo mpanolana #RohtakBravehearts – Ny Revôlisôna manaraka
Mankasitraka an'ireo mpirahavavy ireo tamin'ny fanoherany! #RohtakBravehearts http://t.co/VFIygHkqv3
Tsy nifantoka loatra tamin'ny fahasahian'izy mirahavavy ny sasany tao India fa tamin'ny tsy fihetsehan'ireo mpandeha tao anatin'ilay fiara fitaterana, izay tsy nanao na inona na inona mihitsy:
Tamin'ny tsy fihontsonana sy fikombonam-bava tao anaty fiara nandritry ny raharaha #RohtakBravehearts, noporofoin'ireo lehilahy fa Napunsaks (maty hozatra) sy Mpankasitraka herisetra ry zareo. pic.twitter.com/jn41xcAEBs
Fanamarihan'ny mpandika : mivaky toy izao ny sasany amin'ireo teny ao anaty sary: “Ahantony ireo mpanolana – Lavina ny fanolanana – Sao ho adinontsika – Te-hanova ny fiarahamonina isika saingy tsy te-hanova tena kosa”
Tao anaty lahatsoratra iray amin'ny Facebook, nanome tsiny ireo mpandeha ihany koa i Naveen Jindal, politisiana, tamin'ny tsy firaharahiana tanteraka nasehon'izy ireo:
Mipao-tsatroka aho ho an'i #RohtakBravehearts izay nijoro nanohitra ny fanolanana ary nanome lesona tsara ho an'ireo telolahy meloka. Henatra ho an'ireo mpiray fiara fitaterana tsy mba nisy nitsangana nanampy azy ireo. Mendrika fisaorana mitafotafo ireo tovovavy ireo.
Ny hafa, toa an'i Deepika Bhardwaj, Indiana mpanolotra vaovao amin'ny fahitalavitra, dia nanahy fa haingana loatra ny fanomezantsiny ireo mpandeha tsy nanao na inona na inona avy amin'ireo media mahazatra, angamba noho ny tsy nahavitàna nanadihady tsara ny fandehany manontolo:
Ny heloka vitan'ireo niharan'ny raharaha #RohtakBravehearts dia ny nifamaly tamin'izy ireo momba ny seza ho anà RAMATOA IRAY ANTITRA. Toy ny mahazatra dia efa vonona hatrany ny fakantsary sy ny fitaovan-dry tovovavy.
#RohtakBravehearts izy tenany no nilaza fa nanampy/nanontany izay azony atao ny mpamily. Naato izy (mpamily). Tsy raharahan'ny media izay fianakaviany mandry fotsy any!!
Uma Bharti, minisitry ny fanambadiana, izay iray voalohany tamin'ireo minisitra naneho hevitra ampahibemaso momba ilay tranga, no niteny fa “ny nataon'ireo mpirahavavy ireo no tokony hataon'ny tovovavy rehetra.”
Na teo aza ny fahanginana mahalasa saina nasehon'ireo mpandeha, mety hanaitra ny fahatongavan-tsaina momba ny olan'ny fiahiana ny vehivavy ihany ilay tantara ratsy, angamba hitondra ho amin'ny fanaovana lalàna vaovao. Raha toa ka fambara ireo valinkafatra hita ety anaty media sosialy, azo antoka ny hilazàna fa manaraka akaiky ny tantara ireo Indiana mpamaritra ny politikam-pitondràna/mpanao lalàna.